Machine Kudzidza - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Muchina kudzidza chiito chekuongorora dhata chinogadzira analytical modhi chivakwa. Muchina wekudzidza uyo unogara uchidzidza kuchengetedza zviito zvacho nemazvo uye nekunzwisisa kutsva ndeyechokwadi muchina wekudzidza muchina. Iyo data inopihwa mumuchina wekudzidza nezvose zviito uye zvisiri zvekuita mafidha uyezve iro basa rinowana otomatiki pasina kugara kuchingoda kupindirwa kwevanhu kana kwebhuku. Kudzidza kwemuchina kwakabvumidza makomputa kuwana ruzivo rwakavanzika, vachishandisa maalgorithms anogara achitora kubva kune data ravanopihwa, pasina kurongedzwa zvakajeka kwekutarisa. Kudzidza kwemuchina kunogona kufumura marongero matsva uye zvigadzirwa mune akasiyana masisitimu anosanganisira IT, hutano, zvigadzirwa, simba uye kunyangwe dzidzo. Izvo zvisingaenzaniswi zviyero zvekugona zvaizosvikwa mumabhizimusi masystem neayo ekuzvidzidzira-algo's, uye padanho rega, iwo akangwara gadget aigona kutitungamira isu kune zvese uye kubatsira kurerutsa hupenyu hwedu. Kudzidza kwemuchina isainzi isiri iyo nyowani asi iri kuwedzera nyowani nyowani izvozvi.
Mashini Kudzidza Vanogadzira
Kudzidza kwemuchina nhasi hakuna kuita sezvazvaive zvekare, nekuda kweiyo nyowani komputa matekinoroji. Sezvo mamodheru achifumurwa kune data nyowani, iyo iterative chikamu chekudzidza kwemuchina chakakosha sezvo ivo vachikwanisa kuchinjira vakazvimiririra. Ivo vanogadzira zvinodzokororwa, zvakavimbika mhedzisiro uye sarudzo nekudzidza kubva kumakomputa apfuura akapihwa kwavari. Kudzidza kwemuchina kwakazvarwa kubva papfungwa yekuti makomputa anokwanisa kudzidza asina kunyatso gadzirirwa chero basa chairo kuti rishande, ndiko kuziva maitiro uye vaongorori vari kuronga nzira dzekuona kana makomputa aigona kudzidza kubva kudata kuburikidza nehungwaru hwekunyepedzera. Vanhu vamutsidzira kufarira kumuchina kudzidza kungofanana nekuongororwa kweBasesi uye kucherwa kwedhodhi kwezvishoma zvinhu sekukwanisika kwekuchengetedza dhata, zvine simba uye zvakachipa zvemakomputa ekugadzirisa uye kurima mhando uye huwandu hwedata riripo. Zvese izvi zvinhu zvakaita kuti zvikwanisike otomatiki uye nekukurumidza kuvaka mamodheru ayo anogona kuongorora akaomarara uye makuru data uye kununura yakajeka uye nekukurumidza mhedzisiro padanho rakakura kana zvichidikanwa. Nekugadzira chaiwo mamodheru, iwo mabhizinesi nemasangano vane mukana wakanaka wekucherechedza mikana inobatsira uye inobudirira uye kudzikisira njodzi nekuita kuti kudzidza kwemuchina kuve chinhu chakakosha mumaindasitiri epakati.
Kudzidza kwemuchina kunofambisa masystem ekuziva kuita, kufunga uye kudzidza nesu nenzira yakasarudzika uye yakasikwa. Funga nezvekutengesa masheya, kukurudzira kweNetflix bhaisikopo, kushambadzira paInternet izvo zvinoratidzira zvinoenderana nemaitiro edu ekubhurawuza - iyi yese mienzaniso yekuti kudzidzira kwemuchina kuri kutibatsira kuongorora nyika nenzira dzesimba uye dzekugadzira. Pakutanga, shanduko munhoroondo yevanhu yaive shanduko yeindasitiri iyo yaigonesa maindasitiri kuti awane mabasa mazhinji nekuve nekubudirira uye nekudaro kusimudzira hwaro hwese hwehupenyu. Nhasi, kudzidza kwemuchina ndechimwe shanduko yakadai iyo nyika ichatarisana nayo. Isu tave padanho rekushandisa uye kungwara kwekunyepedzera kuve kiyi mutambi uye kana zvinhu zvikaitwa nemazvo, muchina kudzidza kunobatsira makambani kukura mabhizinesi avo uye kukudziridza nzwisiso ipapo ipapo. Kufanana neRevolution Revolution, chinhu chakakosha pakudzidza kwemuchina kushandira pamwe- tinoda vashandi vakangwara pamwe chete vachishandira muitiro unobudirira uchipa chakabuditswa chaicho. Vashandi vari kutaurwa pano vangave vaine mainjiniya edhata, maIIT vagadziri, vashandisi vebhizinesi, masayendisiti e data, nyanzvi dzekuchera dhata, manejimendi system, vatungamiriri, vagadziri, nezvimwe.
Isu tinonyatsoziva nezve mashini ekufunda mashandiro ari kufamba muhupenyu hwedu nhasi. Kwenguva yakareba, maalgorithms emuchina wekudzidza anga aripo asi izvo zvakagadziriswa ichangoburwa kugona kwekushandisa otomatiki masvomhu kuverenga kune makuru data, nekukurumidza uye nekudzokorora. Mumwe wemienzaniso yatatove kujairana nayo ndeyako wega-inotyaira mota yeGoogle, yaive yakanyanyisa hyped uye yakavakirwa pakudzidza kwemuchina. Iyo ine zvese maficha emota yazvino yakasanganiswa senge adaptive cruise control, kupaka uye navigator vabatsiri, kuzivikanwa kwekutaura uye nzira yemubatsiri inoita kuti ive padyo nemotokari yakazvimirira inoshanda. Zvakare online kurudziro inopa seaya anobva kuNetflix neAmazon, kubiridzira uye kusanganisa kudzidza kwemuchina nemitauro yemitauro yekugadzira kuti uzive zvinotaurwa nevatengi nezvako paTwitter, Nanotronics, iyo inogadzira microscopes yekuona kuti ivandudze kuongororwa, Rethink Robotics ichishandisa iyo kugadzirisa kugadzirwa kwavo. vanomhanyisa uye vanodzidzisa maoko avo erobhoti, vachiwedzera chikamu chevatengi, kunyatso fungidzira kukosha kwehupenyu hwevatengi, kugadzirisa ruzivo rwevashandisi vemu-app, kuona maitiro ekutenga kwevatengi, kuongorora njodzi dzehutano, kuvandudza kuchengetedzwa kwevanhu, uye kuongorora zvirwere zvakanyatsonaka mifanidzo yezuva nezuva yemuchina kudzidza.
Iyo yakanaka muchina yekudzidza system inogadzirwa neyekutanga uye epamberi algorithms, scalability, dhata yekugadzirira kugona, ensemble modelling uye otomatiki uye iterative maitiro. Kudzidza kwemuchina kwazvino kwanyanya munhau nekuda kwekufambira mberi kwayo mu "kudzidza kwakadzama" uko kunosanganisira kukunda kwayo kwakakurumbira kweAlphaGo kwaGo gogo guru Lee Sedol uye nezvimwe zvigadzirwa zvitsva zvinoyevedza pakutenderedza kushandura muchina uye kuzivikanwa kwemifananidzo. Kudzidza kwemuchina kunoshandisa yakawanda yedata, kunoregerera zvakanyanya kwekuchinja mapoinzi e data kana ma parameter uye inotsigira kuomarara kukuru uye kusiana. Izvo zvakagadzirwa zvinoburitswa nemaitiro aya zvinogona kushandiswa zvisina mushe pamatanho akawanda akasiyana, senge analytics masystem, gore komputa, makombero eneti uye akaisirwa masystem. Chinhanho chinoshanduka kubva panguva iyo nzwisiso dzainyanya kuve tekinoroji-inotungamirwa kune yekuziva nguva, iyo inogonesa bhizinesi-rinotungamirwa nzwisiso. Muchina kudzidza, IoT neAI mhando dzakabatana. IoT inokwenenzvera kugona kwehungwaru kana zvasvika kune chaiyo-nguva komputa. Rudzi rwomunhu rwaizokurumidza kutsiviwa chose chose nemichina yokufamba iyo yaizova yakangwara zvikuru kupfuura zvatiri. Iwo michina akatotanga kupinda mumabhizinesi nekuda kwezvakasiyana zvinangwa uye munguva iri kuuya, taizoona mafungu ekushanduka kwema mechanics achifambisa hupenyu hwedu hwezuva nezuva zvakare. Idzi dynamos dzevanhu dzinochinja nzira dzedu dzekutarisa kuhupenyu nekuvaka maonero kubva kune data ravanogamuchira uye nenzira idzo vanhu vasina kumbogona. Izvi zvaizoreva kuti michina inozobuditsa simba revanhu mune zvese zvinhu zvinokonzeresa shanduko, kudhura kwemutengo uye hukuru uye hwakasimba huwandu hwemagetsi. Mifananidzo neizwi kucherechedzwa masisitimu anozoziva vanhu munzira dzakasiyana siyana uye maererano neongororo, makambani anokura nekukurumidza achange aine michina yakangwara kupfuura vashandi.
Muenzaniso weML Vagadziri
Kunyanya kune matatu matatu akasiyana emhando yekudzidza kwemuchina inotariswa, isina kuchengetedzwa, uye yekusimbisa kudzidza. Aya anosarudzwa zvichienderana nebasa rekupedzisa uye kureruka kwemaitiro. Mukudzidza kwakatariswa, iyo algorithm yekudzidza yakatopihwa mhinduro uku uchiverenga iyo data inova mhedzisiro chaiyo yenzvimbo yega yega yedata yakanyorwa zvakajeka kana uchidzidzisa modhi. Inovavarira kutsvaga hukama pane kutsvaga mhinduro kuitira kuti igone kufungidzira kana kupatsanura mapoinzi e data kana nzvimbo dzisina kupihwa dhata dzakatangwa. Inin Kudzidziswa kusingatarisirwe, algorithm yekudzidza haina kupihwa mhinduro panguva yekudzidzira uye kukosha kwacho kuri mukutsvaga kuwirirana uye mapatani. Inovavarira kutsvaga hukama hune musoro pakati penzvimbo dze data. Rudzi rwekupedzisira ndeyekusimbisa kudzidza kunova musanganiswa pakati pekudzidziswa nekutariswa. Inoda kubatanidzwa kune zvakatipoteredza uye inoshandiswa kugadzirisa matambudziko akaomarara kupfuura ekare maviri. Mienzaniso mishoma ine mukurumbira ndeye backgammon, poker, uye Go, ndiyo mitambo yemafungiro uye dhata inopihwa nharaunda kuti mumiriri apindure uye adzidze ega.